गुल्मीको मालिका कृषि सहकारी विउ उत्पादनमा नेपालमै नमुना – Gulminews
Home/कृषी/गुल्मीको मालिका कृषि सहकारी विउ उत्पादनमा नेपालमै नमुना
गुल्मीको मालिका कृषि सहकारी विउ उत्पादनमा नेपालमै नमुना
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ असार ८, शुक्रबार ०२:५९ मा प्रकाशित
बुटवल, असार ०७ । खाद्यान्न, तेलहन र दलहन वालीको विउ उत्पादनमा गुल्मीको मालिका कृषि सहकारी संस्था नेपालकै नमुना सहकारी संस्था घोषित भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक नीजि क्षेत्रबाट मकैको विउको जात विकास गरको कारण नेपालमै नमुना सहकारीको रुपमा घोषित भएको हो ।
नीजि क्षेत्रबाट पहिलो पटक मकैको विउ अनुन्धान, परिक्षण गरी जात विकास गरेको कारण यसलाई नेपाल सरकारले पनि नमुना कार्यको रुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का अनुसार गुल्मी जिल्लामा उत्पादन गरिएको ‘रेसुङ्गा कम्पोजिट’ जातको मकै पहिलो पटक नीजि क्षेत्रबाट उन्मोचन गरिएको जात हो ।
वि. स. २०५५ साल फागनु २९ गते एउटा कृषि समुहको रुपमा रेसुङ्गा नगरपालिका १० सिमिचौर गुल्मीमा स्थापना भएको समुहले वि.स. २०६२ साल असोज १३ गते कृषि सहकारीको रुपमा रुपान्तरण भई कार्य गर्दै आएको छ । आफ्नै कार्यालय भवन समेत निर्माण सम्पन्न गरेको सहकारीले अहिले पनि गाउमा मकै, तोरी, गहुँको विउ उत्पादन गरी विक्रि वितरण गर्दै आएको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष हरि प्रसाद पाण्डेका अनुसार वि.स २०५७ सालमा किसानहरुले रामपुर कम्पोजिट, रेसुङ्गा कम्पोजिट, देउती, गुल्मी–२ जातका मकैका विउ उत्पादन गरिएको थियो । यस्तै मनकामना–३, मनकामना –५, मनकामना –६ जातका उन्नत विउ उत्पान गरी किसानहरले विक्रि वितरण गर्दै आएका छन् ।
वि.स. २०६९ सालमा २५ टन मकैको विउ उत्पादन गरी विक्रि वितरण गदैै आएका उनीहरुले २०६४ सालमा पनि सोही प्रकृतिको मकैको विउ उत्पादन गरी विक्रि वितरण गरेका थिए ।
सहकारीले हाल मकैको अलवा तोरी, गहुँ को समेत विउ उत्पादन गदैै आएको छ । किसानका लागि उन्नत विउ विजन कार्यक्रम बुटवलको सहयोगमा १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा अनुदान सम्झौता समेत गरेको थियो । गत बर्षको कार्यविरवरण अनुसार ७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अनुदानस्वरुप संस्थाले भुक्तानी पाई सकेको छ ।
उक्त सहकारीमा प्राधनमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ले समेत सहयोग गर्दैै आएको छ । गत बर्ष सहकारले ९ टन मकैको विउ उत्पादन गरी विक्रि गरेको थियो ।
सहकारीका व्यवस्थापक कृष्ण प्रसाद अर्यालका अनुसार उत्पादन भएको विउ गुल्मी जिल्लाको अतिरिक्त, कास्की, स्याङ्जा, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरुमा जाने गर्दछ । मध्य पहाडी जिल्लाको लागि सिफारिस गरिएको जात भएको कारण सोही प्रकृतिका जिल्लाहरुमा मकैको विउको माग बढि हुने गरेको हो । यो बर्ष किसानहरुको लागि सहकारीले ६ सय १४ किलो विउ किसानहरुको लागि विज वृद्धिको लागि उपलब्ध गराएको छ । जुन ५० प्रतिशत अनुदानमा हो ।
किसानहरुले यस बर्ष १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा विउको लागि मकै रोपेका छन् । अहिले २÷२ किलो रामपुर कम्पोजिट र रेसुङ्गा कम्पोजित, डेढ किलो रेसुङ्गा र १÷१ किलो गुल्मी १ जातको मकैको विउ किसानलाई उपलब्ध गराइएको व्यवस्थापनक अर्यालको भनाई रहेको छ ।
गत बर्ष ६२ जना किसानले विज वृद्धिको लागि मकै रोपेकोमा यस बर्ष ७५ जना किसानहरु सहभागी भएका छन् । किसानबाट संकलन भएको मकैको विउ सहकारीले ५०–५१ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्रि खरिद गर्दछ भने विक्रि गर्दा ५५ रुपैयाँमा होलसेल विक्रि गर्दै आएको छ । फुटकर विक्रिको लागि आएमा ६० रुपैयाँमा विक्रि गर्दै आएको सहकारीका व्यवस्थापक कृष्ण प्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
प्रत्येक बर्ष किसानहरुले आधुनिक यन्त्रीकरण र प्रविधीको प्रयोगगरेको कारण १५ देखि २५ प्रतिशत सम्म उत्पादन वृद्धि हुने गरेको सहकारीको दावि रहेको छ । गाउमा एक जना किसानले ६ क्विन्टल सम्म मकैको विउ उत्पादन गरेर विक्रि गर्दै आएका छन् । अहिले नयाँ जात गुल्मी–२ उन्मोचनको तयारीमा रहेको जात हो । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खुमल २ जातको मकै परिक्षणको लागि समेत रोपेको छ । सहकारीमा कुल २ सय ९२ जना सदस्यहरु आवद्ध रहेका छन् भने ८५ जना किसानहरु विजवृद्धिमा आवद्ध भएका छन् । किसानहरुले सहकारी मार्फत बार्षिक ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएका छन् । मासिक १ सय रुपैयाँ देखि ५ सय रुपैयाँ बचत संकलन समेत गर्दैै आएका छन् । -बुटवल टुडेबाट